Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly James Wan, Warner Bros. namoaka ny tranofiara 'Malignant' mampatahotra
by Waylon Jordan Jolay 20, 2021
by Waylon Jordan Jolay 20, 2021 2,706 hevitra
James Wan ary Warner Bros. dia somary niadana ny famoahana antsipiriany momba ny horonantsary mahatsiravina farany an'ny talen'ny, mamohehatra, fa androany maraina dia manana tranofiara feno fihenjanana izay eo amoron'ny sezanay izahay!
Raha mbola tsy namoaka sinopsis ofisialy ilay horonantsary, hita fa io dia hiompana amin'ny vehivavy iray izay nivadika ny fiainany rehefa nanomboka nahita fahitana andianà famonoana olona nantsoiny hoe Gabriel, izay mety na tsia ho entity avy amin'ny lasa. Rehefa azony antoka kokoa ny fahitany, dia mihetsika ao an-tranony ilay fandrahonana.
Warner Bros. dia nandatsaka ilay tranofiara tao amin'ny Facebook ary nilaza hoe, "ny famonoana olona rehetra dia manakaiky anao kokoa."
mamohehatra dia nosoratan'i Akela Cooper (Hell Fest) mifototra amin'ny tantara nataon'i Wan sy Ingrid Bisu (Ny Nun). Misy ny sarimihetsika Annabelle Wallis (Annabelle), Maddie Hasson (manolana hevi-), George Young (Fandotoana), Jake Abela (mihoatra ny natoraly), ary Jon Lee Brody (tezitra 7).
Hanomboka amin'ny HBO Max sy amin'ny sinema amin'ny 10 septambra 2021 ity seho ity satria Warner Bros. dia manohy mamorona rafitra famotsorana vaovao aorian'ny Covid-19. Nahita fahombiazana vitsivitsy izy ireo tamin'ity taona ity niaraka tamin'ny endrika misy ny famoahana ho an'ny Godzilla vs. Kong, Ny fandresen-dahatra: ny Devoly no nanao ahy, Wonder Woman '84, teto an-tany Kombat, ary Ireo izay maniry ahy ho faty.
Zahao ny tranofiara raha mamohehatra ery ambany – io sehatra fandriana io ihany no hampandeha ny rànanao – ary ampahafantaro anay ireo hevitra raha mijery ianao rehefa tonga amin'ny sinema sy HBO Max amin'ny volana septambra!